EMUI 9.1: Dhammaan wararka ku saabsan lakabka qaabeynta cusub | Androidsis
Eder Ferreno | | Huawei, Noocyada Android
Toddobaad uun baa laga joogaa xilligaa Shirkadda Huawei ayaa xaqiijisay taleefannada ay yihiin waxay noqonayaan kuwa marka hore in la helo EMUI 9.1 Kani waa nooca cusub ee lakabka sumadda. Nooc cusub oo markii ugu horreysay loo sii daayay taleefannada sare ee Huawei iyo Honor. In kasta oo usbuucyadu socdaan, bishan oo dhan, waxay ku sii ballaadhi doonaan taleefannada badan.
Ilaa hada lama oga waa maxay astaamaha cusub ee lagu soo bandhigi doono EMUI 9.1. Nasiib wanaagse, waxaan horeyba u haysannaa jawaabaha arrintan la xiriira. Isbedelada lagu soo bandhigayo noocyadan cusub ee lakabka qaabeynta ee nooca Shiinaha horay ayaa loo shaaciyey. Marka waxaan kuu sheegeynaa wax walboo hoose.
Howlgalinta ayaa durbaba ka bilaabatay Shiinaha. Sidaa darteed, waa waqti ka hor isticmaalayaasha Yurub oo leh mid ka mid ah taleefannada Sharafta iyo Huawei ee galaya marin u helitaanka hore. Shirkadda lafteeda ayaa xaqiijisay in cusbooneysiinta la sii deyn doono bisha Luulyo. Marka waa arin waqti leh.
Maxaa ku cusub EMUI 9.1
Waxaa jira dhowr astaamo oo aad muhiim u ah EMUI 9.1, sidoo kale waa hordhaca GPU Turbo 3. Laakiin isbeddelkani maahan midka kaliya ee aan ka filan karno qaabkan cusub ee lakabka qaabeynta ee nooca Shiinaha. Waxay awoodeen inay ogaadaan shaqooyinka cusub ama isbeddelada lagu soo kordhiyay dhexdeeda. Waxay kala yihiin sidan soo socota:
Sooyaal cusub iyo mawduucyo: Mawduucyo cusub ayaa la soo bandhigay, sooyaalkii iyo astaamihii ayaa dib loo naqshadeeyay codsiyada. Waxa kale oo jira isbeddelo iyo dhawaaqyo cusub oo dhawaaqyo ah iyo qaylodhaan.
Nolosha Dijitaalka ah: Huawei ugu dambeyntii wuxuu soo bandhigayaa muuqaalkan EMUI 9.1. Thanks to muuqaalkan waxaan awood u yeelan doonnaa inaan xakameyno waqtiga aan u isticmaalno moobilkeena maalin kasta, marka lagu daro inaan awood u yeelan karno inaan xadidno haddii aan u maleyno inaan aad u isticmaalno.
Naqshad casri ah: Interface interface ka fudud in la isticmaalo ayaa la keenay. Sababtaas awgeed, waxaa la xaqiijiyey in qaar ka mid ah tallaabooyinka dhexe la doonayo in la tirtiro, si loo awoodo in si dhaqso leh waxqabadyada qaarkood loo fuliyo.
HiVoice oo la xoojiyay: Aqoonsiga codka ee taleefannada ayaa lagu hagaajiyay qaabkan cusub. Sidan oo kale, waxay noqon doontaa suurtagal in lagu kiciyo shaqooyinka qaarkood taleefanka adoo adeegsanaya amarrada codka. Hawlaha sida iskaanka QR code ama sawir iska qaadis ah.
Maamulaha ereyga sirta ah: Maamulayaasha furaha ereyga ayaa lagama maarmaan u ah Android maanta. Sidaa darteed, EMUI 9.1 waxaan ka helnay maamule cusub, taas oo aan ugu mahad celineyno taas oo aan ku keydin karno oo aan u maamuli karno diiwaanadeena si dhakhso leh oo fudud.
Kordhinta dhabta ah ee dhabta ah: Waxaan helnaa taxane ah howlo cusub oo loogu talagalay xaqiiqda la kordhiyay, si loo ballaariyo ikhtiyaarrada kamaradaha. Tusaale ahaan, waxaan tilmaami karnaa cuntada waxaana naloo sheegi doonaa inta kaloori ee ay leedahay. Intaa waxaa dheer, waxaan heli karnaa macluumaad ku saabsan walxaha marka aan higsaneyno, la mid ah waxa Google Lens sameeyo.
Amniga oo hagaagay: EMUI 9.1 sidoo kale waxay soo bandhigaysaa horumarin lagu sameeyay amnigeeda. Xaaladdan oo kale, waxay noqon doontaa nidaamka laftiisa oo baari doona barnaamijyada la rakibay iyo kuwa aan rakibi doonno. Tallaabooyinkan, waxaad ku xaqiijin kartaa inay ammaan yihiin. Xaaladdaha khataraha ka iman kara, waa naloo digay waxaana naloo soo bandhigay suurtagalnimada in la joojiyo barnaamijyadan.
Huawei Wadaag OneHop: Ficil loo abuuray si loo fududeeyo isku xirnaanta degdega ah ee udhaxeysa PC (hada kaliya Huawei MateBook) iyo taleefanka Huawei iyo Honor. Sidan oo kale waxaa suurtagal ah in si dhakhso leh loogu wareejiyo faylasha, illaa 30MB / s xawaare.
Talooyin caqli iyo waano ah: EMUI 9.1 waxaan ku lahaan doonnaa talooyin ku saabsan isticmaalka taleefanka uu nidaamku laftiisu bixiyo. Waxay ina xusuusin doontaa qaar ka mid ah howlaha ama howlaha la heli karo, iyo sidoo kale waxay kugula talineysaa inaan isku dayno qaar ka mid ah astaamaha cusub. Waxaad sidoo kale wax ka baran doontaa isticmaalka maalin kasta ee taleefanka, sidaa darteed waxay na siin doontaa talooyin iyo tabaha aan ku qabanno howlo gaar ah oo aan caadiyan si dhakhso leh u qabanno.
Sida aad u jeeddo, EMUI 9.1 waxay la timid muuqaalo badan oo cusub loogu talagalay dadka isticmaala taleefannada Huawei iyo Honor. Hadda, waa uun sugitaanka cusboonaysiinta inay soo baxdo mar walba. Waxyaabaha ay tahay inay dhacaan bishan Luulyo, sida ay xaqiijisay shirkadda lafteeda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Huawei » EMUI 9.1: Dhammaan wararka ku soo dhacaya telefoonnada
Noocyada iyo soo bandhigida Galaxy Tab A 8.0 (2019) cusub oo ka duwan ayaa la helay